World Wide Web umsunguli Tim Berners-Lee wabhala nencwadi evulekile ukuze European Parliament, lapho "uyise Inthanethi" kunxusa ukuba silondoloze ukufinyelela okulinganayo kanye evulekile kunethiwekhi wonke umuntu, kungakhathaliseki ukuthi abaluphi uhlanga, umsebenzi kanye ukushuba we esikhwameni.
UMdali inthanethi inkululeko yakhe
WaseBrithani ongazazi izindlela Tim Berners-Lee ngesikhathi enqaba patent wakhe wokusungula kuphela ngenxa yokuthi wayefuna ukushiya ukufinyelela kuyo ivulelwe bonke. Ngokusho kwakhe, kuphela inkululeko angenamkhawulo internet anginike ithuba ukuthuthukisa futhi babe umhlaba wonke, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka ukucabanga hhayi kuphela esikhathini esizayo kodwa futhi okwamanje.
Namuhla, umdali internet uzophinde abe isikhashana ukuzivikela kwakhe, ikakhulukazi, ukuba ukuvikelwa zabantu abavamile cishe abawazi ukuthi ilungelo labo lokuthola World Wide Web ngokushesha kungase kudle isikhathi kokubili izinhlangano ezinkampani uhulumeni. Ngokusho Berners-Lee, imithetho ephathelene-Inthanethi kumele bagcine ukungathathi hlangothi ngokuphelele futhi akabathandi izinkampani ezinkulu.
BEREC neziqondiso zomthetho
I-European Commission for wokuLawula se-Electronic Communications (BEREC) kuze kube sekupheleni kuka-August kuya lungiselela kubhala luhlaka uhlu iphrojekthi nemiyalelo European Union ePhalamende. Le mihlahlandlela izosetshenziswa ukwakha imithetho emisha kanye nemikhawulo kungenzeka. Phakathi nomhlangano kuboniswana Commission Berners-Lee eshicilelwe incwadi evulelekile futhi waqala sicelosikhalo savetheinternet.eu online, esasayinwa ngesibalo esingaphezu kwengxenye yesigidi abantu.
Vula incwadi umdali kuwebhu emhlabeni wonke
Le ncwadi iqukethe isigijimi elandelayo: "Thina, abavamile abasebenzisa i-Internet, akekho abaxhasi abacebile futhi lobbyists asebenzayo. Kodwa sinalo izigidi zabantu - abavamile baseYurophu, zokuqala, zimali, izishoshovu, Blogger nabaculi ezimele - ngamunye wabo wazizwa amandla Inthanethi ovulekile futhi eziningi namathuba entuthuko ukuthi inikeza. Futhi sikulungele ukuvikela internet yethu. "
Ekugcineni, Tim Berners-Lee wabhala ukuthi i-Internet isiyindlela nengqalasizinda edingekayo ezakha kakhulu ezweni lanamuhla, ngaphandle okuyinto akunakwenzeka Ucabanga ukuthi bakhona yini umnotho, akukho intando yeningi, akukho inkululeko. imihlahlandlela Sula nangokwethembeka ukusiza ukuvikela ikusasa ukuncintisana okunempilo, imibono emisha kanye inkulumo zokudala eYurophu. Bona ukumelela amalungelo zonke European, kungakhathaliseki ibala lesikhumba, ezweni lendabuko kanye ukushuba we esikhwameni.
Namuhla-Europe nemithetho yayo ukuhlinzeka inkululeko ukufinyelela noma yikuphi Isilinganiswa Sokwakho Sezintambo, kodwa abameli eziningi kanye ayesekela yokungathathi hlangothi net bathi le mithetho khona sobala "umgodi", okuyinto beyibonakala eziklanyelwe wezinkampane ezinkulu.
Ngokwesibonelo, ngokuhambisana nomthetho wamanje, izinkampani ezokuxhumana ezinkulu ze-Internet Ingasheshisa for isizumbulu ukufinyelela amanye amasayithi, zikunikeza uhlobo "kwindlela okusheshayo." Ngaphezu kwalokho, lezi zinkampani ukuhlela isimiso "ikilasi traffic", lapho wesevisi elawula ijubane ukufinyelela izinsiza ezithile, kungakhathaliseki ukuthi umthwalo traffic.
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ususa VKontakte iqembu
Ephefumula Berodualom izifo iguliswa futhi obstructive kohlelo bronchopulmonary
Indlela ubuyekeze Firefox ngaphandle kwezinkinga
Car yesondlo ludingeka ukuthembeka nokusebenza kwabo
Ukuqeqesha ezikoleni eziphakeme zaseKyrgyzstan
Ukubhema chamber: image, kudivayisi imidwebo. Indlela yokwenza ekamelweni ukubhema ngezandla zakhe